Shabakadda Amiirnuur – Page 263
Puntland Iyo Galmudug oo Ku Dagaalamay Gaalkacyo.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxay ku waramayaan in duhurnimadii maanta ay halkaasi ku dagaalameen ciidamo kala taabacsan maamulada Galmudug iyo Puntland. Inkastoo warar is khilaafsan ay kasoo baxayaan sababta dagaalka ayaa haddana waxay wararka qaar sheegayaan in lagu dagaalamay canshuur laga qaadayay Bakaar […]
Askari ka tirsan ciidamada dowladda federalka ah ayaa duhurnimadii maanta lagu dilay Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in rag hubeysan oo aan heybtooda la garan ay toogteen askariga kadibna ay ka qaateen qorigii uu watay. Askarigan ayaa kamid ahaa kuwa ka hawl gala suuqa […]
Amisom oo Lagu Weeraray Sh/hoose.
Ciidamo ka tirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa weerar ku ekeeyay kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada Amisom xilli ay marayeen inta u dhaxaysa Golweyn iyo Buulomareer oo ka tirsan Sh/hoose. Ilo wareedyo ayaa ku waramaya in weerarku uu ku bilowday hub culus kadibna uu dhacay iska hor imaad muddo socday […]
Vedio+Sawirro: Aqoonyahan Soo Bandhigay Dukuminti Lagu Go’aamiyay Ineysan Soomaaliya Dowlad Dambe Ka Dhalan.
Aqoonyahan Soomaaliyeed oo rug caddaa ah laguna magacaabo Mucallim Cumar Jaamac ayaa soo bandhigay dukuminti caddeyn u ah in reer galbeedku ku heshiiyeen inaaney Soomaaliya dib dambe dowlad xoog leh uga dhalan, iyadoo sirta meesha ku jirta ay tahay in Itoobiya iyo Kenya loo gacan qabto islamarkaana la boobo kheyraadka. […]
Dagaal Saaka Ka Dhacay Degmada Baraawe.
Dagaal ayaa saaka aroortii hore ka dhacay fariisin ay ciidamada dowladda ku leeyihiin magaalada geeskeeda xiga wada Ambareeso, waxaana si aad ah loo maqlayay dhawaqa hubka la isku adeegsanayay. Ciidamada Xarakada Al-Shabaab ayaa ku jarmaaday saldhigga askarta dowladda, illaa iyo haddana xog lagama hayo inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha ka […]
Xildhibaan Ka Tirsan Baarlamaanka Galmudug oo Muqdisho Lagu Dilay.
Israsaareyn goor dhow ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu dilay xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Galmudug. Dhacdadan ayaa ka dambeysay kadib markii uu iska hor imaad dhex maray ilaalada Xildhibaan Maxamad Abuukaate iyo ilaalada xildhibaanka la dilay oo lagu magacaabo Maxamad Cabdi Guuleed. Isgoyska Sayidka ee degmada […]
14-kii bishan waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kasoo degay wafdi uu hogaaminayo Sheekh Muxamad Cabdi Umal oo ujeedadoodu ahayd iney lacago boqollaal kun oo dolar ah gudoonsiiyaan DF. Wafdiga ayaa waxaa loo soo dhaweeyay sida madaxda reer galbeedka oo kale, waxaa garoonka diyaaradaha uga hor tagay madax iyo saraakiil […]
War kasoo baxay Taliska ciidanka Mareykanka qaaradda Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeyn ka dhacday deegaan katirsan gobolka Bay lagu dilay in kabadan 100 dagaalyahan oo katirsan Xarakada Al Shabaab. Intaasi kadib Xarakada Al-Shabaab ayaa dhankeeda gaashaanka u daruurtay war maanta ka soo baxay taliska ciidamada […]
Ganacsato Soomaaliyeed oo Lagu Gumaaday Koofur Afrika.
Ganacsato Soomaaliyeed oo ay tiradoodu gaareyso Ilaa 5 qof ayaa lagu dhex dilay dukaan uu ganacsade Soomaali ah ku lahaa degmadda KwaDlangezwa ee Waqooyiga Gobalka KwaZulu-Natal ee dalkaas iyadoo sidoo kale la dhaawacay labo qof oo kale oo ay xaaladoodu aad u liidato. Weerarkan ayaa ahaa mid lagu doonayay in […]